डेटिङमा डर किन ? - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
पहिलो डर: भेटको क्रममा के कुरा गर्ने ?
दोस्रो डर: अस्वीकृत हुने डर
तेस्रो डर: सबै कुरा राम्रो हुन्छ कि भन्ने
चौथो डर: प्रतिबद्धताको डर
पाँचौं डर: सही व्यक्ति नपाएकोमा डर
यस्तो डर लिएर बाँच्ने तपाईं एक्लो मान्छे भने होइन । हामीहरू धेरैमा यो डर महसुस हुने गर्छ । अझै नराम्रो कुरा, यो हुन सक्छ कि हामीले डेट गर्दै गरेका व्यक्ति सही छ वा खराब छ रु कहिलेकाहीँ त के पनि हुन्छ भने धेरै पटक तपाईं डेटिङमा गए पनि तपाईंले अर्को साथीलाई चिन्न सक्नुहुन्न । यो डरको अर्को रूप हो ९ प्रत्येकचोटि जब तपाईं फरक व्यक्तिसँग डेटिङमा जानुहुन्छ भने त झनै तपाईंले उसलाई चिन्न सक्नुहुन्न । जसको कारणले तपाईं‌ डेटको अवधारणाबाट डराउन शुरू गर्नुभयो। हेर्नुहोस् यो जेन्युइन डर हो, तर जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि, तपाईंले यसलाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैलाई मनपराउन जबरजस्ती नगर्नुहोस्। कुनै पनि कुरालाई मनपराउन समय लाग्न सक्छ । राम्रो चीज प्राप्त गर्नका लागि केही समय लगानी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं, ६ कात्तिक । मलेसिया सरकारले दिएको आममाफी कार्यक्रम (रिक्यालिब्रेसन पुलाङ) कार्यक्रम अक्टोबर १६...
मलेसियामा श्रमिक अभाव हुँदा एकै कामदारले दुई ठाउँमा काम गर्दै
फ्री भिसामा मलेसिया जाने कामदारको अभाव ! आखिर किन यस्तो ?
मृ;त्यु हुनु केहीबेर अघि श्रीमतिलाई फोन गरेर यसो भनेका रहेछन्
मलेसियामा नेपाली कामदारको अभाव, मलेसियाले चाल्यो यस्तो कदम..